ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၂၁-၅-၂၀၁၃ - ညပိုင်း)
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၂၁-၅-၂၀၁၃ - ညပိုင်း)
- ၉၀ ခု ရွေးကောက်ပွဲ အထိမ်းအမှတ် ကြေညာချက် ထုတ်ရခြင်းမှာ ဆက်လက် အလိမ်ခံရမည်ကို သတိပေးလို၍ဖြစ်ကြောင်း မင်းပြားအမတ် ပြော click
- အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်း အားနည်းမှုကြောင့် အရေးပေါ် အခြေအနေ ကြေညာရခြင်းဖြစ် click
- မိတ္ထီလာပဋိပက္ခ အရေးပေါ်အခြေအနေအတွက် လွှတ်တော်က ရက်ပေါင်း ၆၀ သတ်မှတ် click
- မိတ္ထီလာ လူသတ်မှု နှစ်ရှည် ထောင်ဒဏ်များချ click
- မိတ္ထီလာ အကြမ်းဖက်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ၇ ဦးကို အမြင့်ဆုံး ပြစ်ဒဏ်ချ click
- မိတ္ထီလာ လူသတ်မှု၊ အကြမ်းဖက်မှုများဖြင့် လူ ၇ ဦးကို ထောင်ဒဏ်များ ချမှတ်လိုက် click
- ဇနီးနှင့် ကလေးမွေးဖွားနှုန်းကို ကန့်သတ်ထားသော မောင်တောခရိုင်တွင် Blacklist စာရင်းဝင် ကလေးအရေအတွက် ၆၀,၀၀၀ ရှိ click
- ပြည်သူ့လယ်ယာမြေ ကာကွယ်ရေးကော်မတီ ဆုံးဖြတ်ချက်ရပြီးမှသာ ဆန္ဒပြမှုများကို ပြုလုပ်မည် click
- အလုပ်သမားနှင့် အလုပ်ရှင်ပြဿနာ ဖြေရှင်းရေး စက်မှုဇုန်များကို လွှတ်တော်က စစ်ဆေးမည် click
- တော်ဝင်သစ်အလုပ်သမားတွေ ဆန္ဒပြလို့ တရားစွဲခံရတာ တရားမျှတမှုမဲ့နေဟု CSO များ ပြော (ရုပ်သံ) click
- US နှင့် UK မပါဘဲ အစိုးရနှင့် KIO မေလကုန်ပိုင်း မြစ်ကြီးနားတွင် တွေ့ဆုံမည် click
- အစိုးရနှင့် KIO ဆွေးနွေးပွဲ ကုလ အထူးကိုယ်စားလှယ် တက်ရောက်မည် click
- လက်နက်ကိုင် တိုင်းရင်းသားများ ပါဝင်နိုင်သည့် KIO နှင့် အစိုးရ ဆွေးနွေးပွဲ click
- ကျောင်းဖွင့်ချိန်နီး၍ ကချင်ဒုက္ခသည် ကလေးများအတွက် ကျောင်းနှင့် ဘော်ဒါဆောင်များ လိုအပ် click
- စခန်းလူဦးရေ တသောင်းကျော်ထဲက ဒုက္ခသည် ၂၈ ဦးသာ ပြည်တော်ပြန် ဆန္ဒရှိ click
- မယ်လဒုက္ခသည်စခန်းအတွင်း လူသတ်မှုတခု ဖြစ်ပွား click
- ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအားလုံး စည်းလုံးရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ကြိုးပမ်းကြမည် click
- ပအိုဝ်းပြည်သူ့စစ်က အန်အယ်လ်ဒီပါတီဝင်များကို ဖိအားပေး နုတ်ထွက်ခိုင်း click
- ရှမ်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများ ဖက်ဒရယ်စနစ် လေ့လာ click
- ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ ကျားဖြူပါတီမှ မဲဆန္ဒနယ် တိုးချဲ့ပြိုင်ဆိုင်မည် click
- RNDP နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေးတွင် လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ကြိုပြင်မည် click
- ABSDF (မြောက်ပိုင်း) ငြိမ်းချမ်းရေးကိုယ်စားလှယ်ကို အစိုးရ တာဝန်မယူ click
- ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးသည် ABSDF ၏ ဆန္ဒဖြစ် click
- အစိုးရနှင့် ကျောင်းသားတပ်မတော် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ အကြိုညှိနှိုင်း (အသံ) click
- ဦးသိန်းစိန် အမေရိကန်ခရီးအပေါ် သူတို့အမြင် (အင်တာဗျူး) click
- မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အားပေးမည်ဟု အိုဘားမား ပြော click
- မြန်မာနိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အမေရိကန် ကူညီမည် click
“ဝမ်းသာလွန်းလို့ မျက်ရည်များတောင် လည်လာတယ်” (ကာတွန်း Stephff - ဧရာဝတီဝက်ဘ်ဆိုက်)
- ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် ကုမ္ပဏီကိုယ်စားလှယ် ၃၀ ကျော်နှင့်အတူ လာမည် click
- မီဒီယာ ဖွံ့ဖြိုးဖို့ တိုင်းပြည်စီးပွား ကောင်းဖို့ လို၊ အစိုးရက ရုပ်သံမီဒီယာတွေကို ထိန်းချုပ်ထားဆဲဟု ညီလာခံက ဆို (ရုပ်သံ) click
- တရုတ်ပိုက်လိုင်းများမှ တအာင်းမျိုးဆက်သွေးများ စုတ်ယူနေခြင်း (ဆောင်းပါး) click
- မဲခေါင်မြစ်ဝှမ်းဒေသ မူးယစ်မှုဖြင့် သံသယရှိသူ ၈၀၀ ကျော် ဖမ်းဆီးရမိထား click
- မြန်မာ–အိန္ဒိယ ကုန်သွယ်ရေး တိုးမြှင့်ရန် ပြင်ဆင်ပြီ click
- မြန်မာ့ရွှေ ကမ္ဘာ့ဈေးထက် မြင့်နေသဖြင့် အရောင်းအ၀ယ် အေး click
- ဒေါ်လာဈေး မြင့်တက်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး အမြင်သဘောထား click
- လယ်ယာမြေ မှတ်ပုံတင်ခွင့်မရ click
- ဆန်စပါးအသင်း ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းမည် click
- ဘိလပ်မြေစက်ရုံ ဆောက်မည့်ကိစ္စ ကန့်ကွက်စာတင် click
- Mobile Team များဖြင့် ဖမ်းဆီးနေသော်လည်း မှောင်ခိုတင်သွင်းမှု တားနိုင်ခြင်း မရှိသေး click
- အော်ပရေတာ ပြုလုပ်ရန် အမရာနှင့် MTN ကုမ္ပဏီတို့မှ ဒေါ်လာ ၁.၅ ဘီလီယံ မြှုပ်နှံမည် click
- ကုန်သွယ်မှု တိုးမြှင့်နိုင်ရန် ထိုင်းနိုင်ငံမှ စီးပွားရေးစင်္ကြန်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးမည် click
- အာရှကိုသာ အားထားပို့သည့် မြန်မာ့နှမ်း အီးယူဈေးကွက်သို့ တိုးချဲ့ click
- KFC စားကုန်လုပ်ငန်း ဖွင့်ရင် အလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်း ပိုရလာမည် click
- ကုန်သည်ကြီးများဟိုတယ် နေ့ညမပြတ် တည်ဆောက်မှု ရပ်ကွက်လူထု မခံနိုင် click
- ရန်ကုန်တွင် အခွင့်မရှိ အမှိုက်မကောက်ရ click
- ပတူကောင် ကိုက်ခံရတဲ့ ကလေးနှစ်ဦး သက်သာလာသဖြင့် ဆေးရုံမှ ဆင်း (ရုပ်သံ) click
- ခရက်ဒစ်ကဒ်ဖြင့် ပန်းချီကားများ ဝယ်နိုင်ရေး စီဘီဘဏ် ဝန်ဆောင်မှုပေးမည် click
- ကာတွန်းရုပ်ပြ ဈေးကွက် ဘာကြောင့် ပျက်ရတာလဲ click
- နံ့သာမြိုင်စခန်းက ပညာရေး … ဝေးနေဆဲ (ဆောင်းပါး) click
- မြန်မာပြည်က ညီလေး ဖတ်ဖို့ အမေရိကန်ပညာရေးစနစ် (ဆောင်းပါး) click
- သား ယောင်္ကျားလေးများ ထိန်းကျောင်းခြင်း (သူ့အတွေး သူ့အမြင်) click
- သူငယ်တန်းကလေး အတွေး (ကာတွန်း) click
- မြန်မာအမျိုးသမီးအသင်း အိန္ဒိယကို နိုင်ခြေများဟု ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ပြော click
- Miss Supranational ပြိုင်ပွဲအတွက် မြန်မာအမျိုးသမီးများကို ဖိတ်ခေါ်ပြီ (ရုပ်သံ) click
- နိုင်ငံတကာသိပ္ပံပွဲတွင် မောင်းသူမဲ့ကား တီထွင်သည့် ကျောင်းသား ဆုရ click
- Facebook ကတစ်ဆင့် ဆရာများကို တိုက်ခိုက် click
- ဘောလုံးသမား ကြယ်တပွင့် အဖြစ်ကနေ အနားယူတော့မယ် ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်း click
အုပ်ဆရာမကြီးက "ပင်စင်သွားရခါနီးလို.တိုင်တာ၊ တောတာမလုပ်ဖို."တားမြစ်တယ်လို.သိရတယ် ၊
သားလေး များ .. မပျက်စီးရေး ...တားဆီးအရေးယူနိုင်ရေး တင်ပြတာပါ ။
ဆရာ ဆရာမတွေ ကို ကိုယ့်ဒေသ ကိုယ် ပြောင်းချင်တာ
ကျောင်းကဖွင့်တော့ မယ် အြေ ပာင်းအရွှေ့ အမိန့် တွေ့ က ကန်တော့မှ
Order ထုတ်တဲ့ ပုဂ္ဂီုလ် တွေ ကရော ပီတိ နဲ့ ထုတ်ပေးလို့ မရဘူးလား?
သန်လျှင် အထက ၁ စားရေးမ ငွေတောင်းကြမ်းပါတယ်